आतंकवाद इन्डेक्समा नेपाल - LiveMandu
यस वर्षमा सन् २०१८ को उर्तरार्धमा आइपुगियो अनि हालसालै प्रकाशित भएको छ यो विश्व आतंकवाद इन्डेक्सको अध्ययन ।
अमेरिकाको यूनिभरसिटी अफ मेरिल्याण्डले अमेरिकी गृहसुरक्षा हेर्ने निकायसंग मिलेर गत ६ वर्ष देखि बिश्व आतंकवाद इन्डेक्स अनि देशहरुको नामांकन र जोखिम पहिल्याउने अध्ययन गरिरहेको छ । यस वर्षमा सन् २०१८ को उर्तरार्धमा आइपुगियो अनि हालसालै प्रकाशित भएको छ यो विश्व आतंकवाद इन्डेक्सको अध्ययन ।
नेपालको पनि अध्ययन गरिएको अनि स्थान तोकिएको यस रिपोर्टका केही खोजहरु अचम्म अनि उदेक लाग्दा पनि छन् ।
शान्ती र त्यसको फाइदालाई मापन गरिएको भनिएको यस रिपोर्ट अहिले विश्वमा बहुतै चर्चामा छ । सन् १९९८ देखि सन् २०१८ सम्मको आतंकवाद, आतंकवादी संगठनहरु अनि मृतकको सख्याँ लगायत अन्य डाटाहरु यस रिपोर्टले समावेश गरेको छ । सन् १९९८ देखि आजसम्म विश्वमा कूल १७० हजार आतंकवादी आक्रमणहरु भएको तथ्याकं देखिन्छ । सन् २०१६ र सन् २०१७ मा भनें अन्य वर्षहरुको तुलनामा आतंकवादी आक्रमण अनि मृत्यूहरु करिब २७ प्रतिशतले घटेको पाइन्छ । सन् २०१७ मा आतंकवादका कारणले १८८१४ जना मानिस मारिएको देखिन्छ । क्रमश अब ईजीप्ट र सोमालियामा आतंकवादको क्रम गत वर्ष १२३ प्रतिशत र यस वर्ष ९३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।
अहिले सम्म पनि आतंकवादको हत्या अनि क्षतीमा सर्वाधिक बढि हिस्ससा ईराक, सिरिया अनि अफगानीस्तानको रहेको देखिन्छ जहाँ आइसील अनि आइसीस जस्ता आततायी संगठनहरुको बोलवाला रहेको रिपोर्टले देखाँउदछ । गएका १८ वर्षहरुमा बम आक्रमण अनि बिष्फोटक कुराहरु लगायत बन्दुक आक्रमणको सिलसिला धेरै रहेको देखिन्छ । आन्तरिक द्धन्द लगायत राजनैतिक कारण अनि स्वार्थ पनि आतंकवादका मुख्य कारक तत्वहरुका रुपमा पाइन्छ । आतंकवादको कुनै स्पष्ट परिभाषा विश्वमा कुनै सरकार र देशले दिन नसकेपनि विश्वका हरेक कुना यस जोखिमको चपेटामा रहेको बताँउदै यस रिपोर्टले देशहरुलाई सूचिकृत पनि गरेको छ ।
७ वटा रंगहरुमा देशहरुको जोखिम जनाइएको छ जसमा नेपाल भनें तेश्रो श्रेणीको जोखिममा राखिएको छ । भारत र चीनको बिचमा रहेको हाम्रो देशलाई किन प्यालेस्टाइन, बुरुन्डी, रुस, जर्मन अनि ईज्रायल झैं राखियो भन्ने बिषयमा भनें कुरा खुलाइएको छैन् । सर्वाधिक धेरै जोखिममा ईराक ९ दशमलव ७४६ अकंका साथ छ भनें हामी नेपाल ५ दशमलव २९५ अकंका साथमा छौं । नेपाललाई यो श्रेणीमा यतिका स्थानका साथ राख्नुका कारण के हो ? जबकि नेपालमा न त कुनै आतंकवादी घटना भएका छन् न त गृहयूद्ध नै छ ।
उता भारत भनें सातौं नम्बरमा ७ दशमलव ५६८ स्थानमा सोमालिया पछि छ भनें चीन चाँही ३६ सौं स्थानमा ५ दशमलव १०८ अकंका साथ छ ।
नेपाल ३३ सौं स्थानमा छ । ईराक अफगानीस्तान, नाइजेरिया, सिरिया र सोमालिया भारत भन्दा अगाडि छन् । उत्तर कोरिया, टुर्कमेनीस्तान, रोमानिया जस्ता देशहरु यस रिपोर्टमा समावेश गरिएका छैनन जबकी यी देशहरु आतंकवादको सूचीमा अत्याधिक बिवाद अनि जोखिममा देखिन्छन् । यस वर्ष कूल आतंकवादी हत्याहरुमा सिरिया, सोमालिया, नाइजेरिया, ईराक र अफगानीस्तान अगाडि छन् ।
आतंकवादी संगठनलाई जोखिम अनि पक्कडका आधारमा बिभाजन गरिएको छ जस्मा अग्रपंक्तिमा आइसील आएको छ । आइसीसको पत्तासाफ पार्न रुस अनि अमेरिका पनि लागेको समयमा आइसीलको प्रार्दुभाव पनि अचम्म संग भइरहेको देखिन्छ । आइसीलका अलावा बोको हराम, अल शबाव अनि तालीवानलाई विश्वमा ४ ठूला आतंवादी संगठनको सूचीमा राखिएको छ । सन् १९९८ देखि नै घटनाक्रमको अध्ययन गरेर निम्न देशहरुलाई सर्वाधिक जोखिममा रहेका देशका आधारमा यस रिपोर्टले देखाएको छ ।
नेपालको अवस्था मापन गर्दा भारत संगको खुल्ला सिमा, गएको दशकको गृहयूद्ध लगायत आतंकवाद टा्रन्जीटको अभिप्रायले खेलमैदान बनाएको कारणले भन्ने तथ्यहरु आत्मसाथ गरेको हुन सक्ने देखिन्छ । यस रिपोर्टमा नेपाल सरकारको आधिकारिक टिप्पणी या सहभागिताका केही कुरा छैन् । भारतीय चलचित्रहरुमा पनि नेपाललाई आतंकवादको केन्द्र बनाइएको देखाउन थालिएको छ जून नेपालको पर्यटन अनि प्रवर्धनका लागि दुख्खद कुरा हो ।
यस रिपोर्टको आगमन संगै नेपालको पर्यटनमा असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।
बच्चालाई धेरै म्वाइँ नखानुस् यस्तो खतरा देखिन सक्छ
Ranitidine ले क्यान्सर गराउछ?
कालो मसो किन दलियो?